Ururka qareenada Soomaaliyeed oo baarlamaanka ka codsaday in uusan ansixin xubaha golaha adeegga garsoorka | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Ururka qareenada Soomaaliyeed oo baarlamaanka ka codsaday in uusan ansixin xubaha golaha...
Ururka qareenada Soomaaliyeed oo baarlamaanka ka codsaday in uusan ansixin xubaha golaha adeegga garsoorka
Maanta oo isniin ah ayaa waxaa lagu wadaa in Golaha shacabka ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya la horgeeyo Xubnahii Golaha adegga garsoorka oo ay magacaawday Xukuumaddii Xil-gaarsiinta 30/07/2020.
Haddaba Garyaqaan Daahir Maxamed Cali (Dahir Carab) oo ah Xog-hayaha Ururka Qareenada Soomaaliyeed ayaa arinkaan diidmo xogan ka muujiyay isagoona sharci daro ku tilmaamay xubnaba guddigaas, codsi gaar ahna u diray golaha shacabka uguna baaqay in aysan ansixin xubaha golaha adeegga garsoorka.
Daahir Carab yaaa yiri “Haddaba maadaama Magacaabista Xubnahaas ay ahayd sharci darro waxaan golaha shacabka ugu baaqayaa in aanay ansixin oo ay diidaan isla markaana aanay raalli ka noqon jebinta dastuurka iyo ku xadgudubka shuruucda kale ee dalka.”
“Ugu dambayntii magacaabista guddigaas waxay baalmarsantahay Dastuurka iyo sharciga dhisidda golaha adeegga garsoorka waana ku tumasho sharci oo qaawan, sidaa awgeed waxaan labada aqal ee Baarlamaanka ka rajaynaynaa in aysan aqbalin sharci darro, sidoo kale waxaan rajaynayaa in ururka qareennadu qaato talaabo kasta oo looga hortagaayo ku tumashada sharciga ee Xukuumadda kalsoonida barlamaanka waysay.”
Yeelkeede, hadalka ururkaan ayaa kusoo beegmaya xilli maanta lagu wado in arintaan Baarlamaanka meel-mariyo sidaasna ay sharci ku noqdaan xubnaha guddigaan muranka uu ka taagan yahay magacaabistooda.